Ciidamada Dowlada oo xoog ku galay halka uu ka socday Shir Maamul Gooni ah loogu sameynayo Gobolka Hiiraan – STAR FM SOMALIA
Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya Gobolka Hiiraa, Ciidamo katirsan Dowlada Soomaaliya ayaa Goordhow gudaha ugalay halka uu ka socday shir lagu dhisyay Maamul ugaar ah Hiiraan.
Ciidamada Milatariga Soomaaliya ayaa lasoo sheegayaa iney xoog ku galeen Baar Xasan Dhiif oo ku yaala Bariga Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Halka ay galeen Ciidanka waxaa ka socday shir ay soo agaasimeen Odayaal ka biya diiday iney tagaan Magaalada Jowhar oo ay taalo gogosha Maamulka loogu sameynayo Gobolada Hiiraan iyo Sh.Dhexe ee HirShabeelle.
saraakiil ka tirsan Ciidanka Xooga dalka ayaa inoo sheegay in Amarkan uu bixiyay taliska Ciidanka xooga dalka ee Hiiraan si loo carqaladeeyo shirka.
warar soo baxaya waxa ay sheegayaan inuu jiro khilaaf xoogan oo udhexeeya saraakiisha Ciidanka iyo Maamulka Gobolka oo ku aadan is hortaaga lagu sameeyay shirkii Beledweyne.
si kastaba Magaalada Beledweyne waxaa shalay lagu soo Gaba-gabeeyay kulan lagu soo bandhigay dastuurka uu yeelanayo Maamulka Hiiraan State oo dhawaan ay Duubabka-dhaqanka dhismihiisa uga dhawaaqeen magaalada Beledweyne.